भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई एक नेपालीको खुल्लापत्र
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:५७
श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ज्यू,
महामहिम ज्यू ! तपाईलाई आज म सानो देशको सानो गाउँबाट सानो मान्छेले चिठ्ठी लेख्न पाउँदा म आफैले आफैलाई तपाईकै इष्ट देवता ‘जय श्रीराम’ (ईश्वर) सँग स्पर्श गरेको अनुभूती गरेको छु । मैले तपाईलाई उपदेश दिन त सक्दिन तर सुझाव र सुचना चाँहि दिन अवश्य सकिन्छ कि भन्ने आशले यो चिठ्ठी लेखिरहेको छु ।
त्यही हाम्रो पुर्खाको नासो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराकै कुरा हो । तपाईसँग हामीले जोरी खोजेको होईन महामहिम ज्यू । हामीले हाम्रो नक्साको सिमांकन मात्र गरेको हो । हाम्रो पुर्खाको बिरासतलाई संरक्षण मात्र गरेको हो ।
यो पुर्खाको धरोहरलाई हामीले जोगाउन सकेन भने हामीलाई भावि पुस्ताले सराप्ने छन् । धिक्कार्ने छन् । त्यसैले हाम्रो यो मातृभूमिलाई कसै बैरीले गिद्दे नजर मात्र लगाए पनि हामीलाई सह्य हुँदैन किनभने हाम्रा पुर्खाले बिस्तारवादी ब्रिटीसका बिरुद्वमा सिमानाको किल्लामा बगाएको रगत अझै आलै गनाईरहेको छ, महामहिम ज्यू । त्यसैले मेरा पुर्खाले सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई अहिलेसम्म पनि गोर्खालीले निरन्तरता दिईरहेका छन ।
गोर्खालीहरू अनाहकमा कसैसँग जोरी खोज्दैन तर कसैले जोरी खोज्यो भने पछि नहट्ने हाम्रो पुर्खौली परम्परा छ । महामहिम ज्यु तपाईहरुको सुरक्षाकर्मीको कतिसम्म ज़्यादती छ भन्ने कुरा म बसेको एउटा सानो गाउँ ठोरीको उदाहरण दिन चाहान्छौ । हुन त, यस्ता ठोरीको जस्तो बिवाद धेरै स्थानमा छन । तपाईको सुरक्षाकर्मीले कहिले पुल चल्न दिदैन । कहिले नेपालको बाटो भत्काउन आउँछन् । कहिले सिमानामा पोष्ट बनाउन आउँछ । कहिले जोगीको भेष बनाएर सीमा मिच्न आउछन । यो के हो महामहिम ज्यु ? के भारतको नीति नै यस्तो हो?
के सबैलाई छिमेकीसंग यस्तै ब्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने प्रशिक्षण दिएका छन् ? महामहिमज्यू ! हामी प्रष्ट भन्न चाहान्छौ । सिमानामा यस्तो हर्कत हामीलाई पनि कदापि सह्य हुँदैन । अंग्रेजले बलात्कार गरेर छोडीएको देशलाई त ‘मेरा भारत महान हे’ भनेर त्यत्रो माया लाग्छ भने हाम्रो देश संसारमा नै शुद्ध कसैले छुन नसकेको नेपाललाई कति माया लाग्छ होला ? त्यसैले सिमानामा धेरै रवाफ नदेखाऊ ।
हो, हाम्रा पुर्खाले हामीलाई समृद्वि दिन सकेनन । सम्पन्नता दिन सकेनन तर हाम्रा पुर्खाले एउटा असल मातृभूमि दिएर गएकोमा हाम्रा पुर्खा प्रति हामी गर्व गर्छौ । विश्वमा गोर्खाली जातीले एउटा सर्वभौमसत्ता राष्ट्र राख्न सकेकोमा हाम्रो देश र हाम्रा पुर्खा प्रति हामी गौरव गर्छौ । यो गोर्खालीको लागि कहिल्यै भुल्न नसक्ने पुर्खाको बिरासत हो । त्यसैले राष्ट्रीयता, स्वाभिमान र राष्ट्रीय अखंडताको विषयमा हामी गोर्खालीहरु धेरै सम्वेदनसिल र भावुक छौं ।
गोर्खालीले आफूले आफैलाई बिर्सन सक्छ तर यो पुर्खाको चिनोलाई बिर्सन सक्दैन । त्यसैले यो राष्ट्र बचाई राख्न आजको पुस्ताले पनि त्यति कै ज़िम्मेवार र गम्भीर रहनु हाम्रो प्रमुख दायित्व सम्झेको हो । हाम्रा पुर्खाहरुले भन्नु हुन्थ्यो “दक्षिणको छिमेकीसँग जहिले पनि होसियार रहनु” त्यसैले महामहिम ज्यू होसियारी मात्र अपनाएको हो । किनभन्ने विगतको तपाईहरुको ब्यवहार हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र देश जम्मु कश्मीर र हैजरवादलाई जवाहरलाल नेहरुले भारतमा विलय गरेर बिस्तारवादको चरित्र देखाए । त्यस्तै पछि इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेर बिस्तारवादको दुनियाँमा अर्को कीर्तिमान रचे । तपाई पनि आधुनिक भारतको सबैभन्दा चर्चित अनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भन्छन् ।
तपाई पनि सिंह जस्तो गर्जिरहनु भएको छ । त्यसैले महामहिम ज्यू, हामीलाई शंका लाग्न थाल्यो । सिक्किम, जम्वु कश्मीर र हैजरवादलाई निलेर इन्दिरा र नेहरुले विस्तारवादी इतिहास रचे जस्तै कतै आफुलाई शक्तिशाली देखाउन तपाई पनि कहिं इन्दिरा र नेहरुकै बाटो रोजेको त होईन ?
यदि त्यस्तो ‘कु’ बाटो रोज्यो भन्ने त्यो तपाई र तपाईको देशलाई आजसम्म कै सबैभन्दा ठूलो घात हुन्छ। विश्वमा विस्तारवादको युग चल्दा समेत हाम्रा पुर्खाले जोगाएर राखेको मुलक हो यो । गोर्खालीले बिस्तारवादबिरुद्व हिजो पनि लडेकै हो, आज पनि लड्न तयार छ ।
मातृभूमिको लागि गोर्खालीले एक थोपा रगत रहुन्जेल युद्वको मैदानमा बैरीसँग लडाई लड्न छोड्ने छैन । महामहिम ज्यू, अरु छिमेकी देश निलेको जस्तो नेपाललाई सोच्नु भएन । बिस्तारवादी अंग्रेजको नीतिलाई समेत अस्वीकार गरेर, अंग्गुरेजलाई अस्वीकार गरेर युद्व रोज्ने गोर्खाली जाती हो हामी । सानो देश भनेर हेप्नाले गर्दा अंग्रेजले अनुभवी लड़ाकु युद्व सेनापति जनरल जिलेस्पीले युद्वको मैदानमा देह त्याग्नु पर्यो । र, गोर्खालीको बहादुरीलाई अंग्रेजलेस्वीकार गरि सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी गर्न बाध्य भएको इतिहास साक्षी छ ।
महामहिम ज्यू, अहिलेको नेपाल भारतको समस्याको समाधान पनि त्यही सुगौंली सन्धीमा उल्लेख छ । बिज्ञहरुलाई राम्रोसँग पढ्न लगाउनु होस् । सन्धीको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिमको भूभाग सबै त्याग्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा काली नदीदेखि पूर्वको भागमा पर्ने कालापनी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालमा भएको यथेष्ट प्रमाण भएन महामहिम ज्यु ?अनि के को लफड़ा ? के मा भयो समस्या ? यसले तपाईको छविमा आँच पुगिरहेको छ। आफ्नो सेना आफ्नै भूमिमा पर्काएर समस्या समाधानको बाटो रोज्दा राम्रो हुन्छ ।
फेरि महामहिम ज्यू, तपाईले त नेपाललाई “हमरा लिए नेपाल तिर्थधाम हे” भन्नुहुन्छ । यदि नेपाल तिर्थधाम हो भन्ने तपाई तिर्थधाम जादा मंदिरको घण्टी राम्रो लाग्यो भनेर झोलामा राख्न खोज्नु भयो भन्ने पुजारीले के गर्छ ? आफुसँग भएको चिम्टा निकालेर तपाईको टाउकोमा हिर्काउने छ । तपाई जति सुकै ठुलो मान्छे किन नहोस् ।
अर्को पटक तपाईलाई मन्दिरको ढोका बन्द हुन्छ । त्यसपछि कहाँ गयो तपाईको धर्म ? अनि कहाँ गयो तपाई त्यागपूर्ण सन्यासी जीवन ? तिर्थ जाँदा सकिन्छ, दान दिएर ।
(लेखक सन्तोष श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठ पर्साको ठोरी गाउँपालिकास्थित सामुदायिक रेडियो बिजयबस्तीका अध्यक्ष हुन् ।